Donutt Total Fibely Dietary Supplement (20 g x 10 sachets) – SUNNY eSTORE
Donutt Total Fibely Dietary Supplemen...
Donutt Total Fibely Dietary Supplement (20 g x 10 sachets)
Medi MyanmarSKU: FS-DONU-1-394 (S022)
ကြည်လင်လှပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ယံအရေပြား အလှကိုဂရုစိုက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးနော်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ် အတောက်တွေကိုပါ ဖယ်ရှားနိုင်မှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသားအရေကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဒါ့ကြောင့် သွေးတွင်းအညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီး အဆီကျလှပစေမယ့် Donutt Totaly Fibely Drink ကို ညတိုင်းသောက်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်!
အဆိပ်အတောက်များ ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားရေကို အတွင်း​ပိုင်းကနေပါ ကြည်လင်လှပချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Donutt Total Fibely Drink လေး ကို သတိရလိုက်နော်။
၃ထုပ်ပါ ၁ ဘူးကနေစပြီး ဝယ်ယူလို့ရတာမို့ စမ်းသောက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အိုကေပါနော်!!!
ဒိုးနပ် အမျှင်ဓာတ်ဖြည့်စွက် အာဟာရတွင်
1. Fructooligosaccharide (FOS)
3. Wheat Grass Extract
4. Black Sesame seed extract
5. Dandelion root extract
7. Apple Cider Vinegar တို့အဓိကပါဝင်ပြီး 100 % Organic Product ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုးနပ် အမျှင်ဓာတ်ဖြည့်စွက် အာဟာရကို ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းမမှန်ခြင်း၊ ဝမ်းကုန်စင် အောင်မသွားနိုင်ခြင်း တို့ကိုသက်သာစေပြီး အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှအညစ် အကြေးများ သန့်စင်ဖယ်ရှားရန် သွေးတွင်းနှင့် အသည်းမှ အဆိပ်အတောက်များ ဖြေလျော့ရန် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီး အသားအရေကြည်လင် လှပရန် သွေးတွင်းအဆီဓာတ် လျော့ချရန် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲရန်အညွှန်း တစ်နေ့လျှင် ၂၀ ဂရမ် ကို ရိုးရိုးရေ (သို့မဟုတ်) ရေအေး (၁၅၀) မီလီလီတာတွင် ပျော်ဝင်မျှတအောင်ဖျော်၍ ညအိပ်ယာမဝင်မီ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
"ဒိုးနပ် (Donutt) နဲ့ဆို ကျန်းမာကြော့ရှင်းလှပခြင်းက အိပ်မက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်"
Includes: 1 box of Donutt (20 g x 10 sachets)